Bu'ura Walqixxummaa Geejjiba Siyaatil - Transportation | seattle.gov
Seenan imaammatoota al-sanyii fi faallaa investimantii al-walqixxummaa sirna geejjibaa keenya keessatti uumee jira, imala irra dheeraa namoota adii hin taanef namoota adii irra sababa buqqa'insaa, fi qaqabiinsa yeroo baay'ee gad'aanaa tajaajila geejjiba hawaasaa qulqullummaa ol'anaa ta'eef qabaachuu dabalatee. Hawaassonni adii hin taane faalama irratti gumaachi isaanii xiqqoo yoo ta'u, jibba sanyii wal-gita hin taane kana dhiibbawwan yeroo-dheeraa isaani mudata, qababiinsa gara hireewwanii fi qabeenyaa daanga'e dabalatee. Bu'uura Walqixxummaa Geejjibaa (TEW) haaraa kana imaammatoota fo hojiiwwan qajeelchaa keessa galchuun tarkaanfii gara dhimmoota kanneenii deebii kennuuti.
Garee-Hojii Walqixxummaa Geejjibaa (TEW) gara jalqaba 2019 keessa uumame gumaacha yaada miseensota baldhaa fi addaddaa gurraachaa, dhalataa jalqabaa, fi namoota adii hin taane fi hawaasota saaxilamoo ta'an irraa barbaaduf. Miseensi tokkoon tokkoo TEW dhaabbatoota naannawaa naannoo Siyaatil-Kiing Kaawuntii kan walitti hidhate fi muuxannoo fi raawwiileen danqaawwan awalitti hidhannoo qaban furmaata kennuuf gargaaran addaan baasuf beekkumsa ogummaa isaanii hojiirra oolcha. Gumaachi yaada isaanii sona fi tarsiimoowwan TEF dhaaf hiikkaa keennuuf fayida irra oolan, kan raawwileen hojjatoota Qajeelcha Geejjibaa Siyaatil (SDOT) waggoota dhufaniif qajeechu dha.
Galoowwan waloo Sagantaa Haqummaa Geejjibaa (TEP) irratti hundaa'uun:
TEFn murtee-kennitootaa, hojjatootaa, abbaa-qoodaawwanii, shariikota SDOT, fi hawaasa baldhaa tiif akka waliin ta'anii sirna geejjibaa haqa qabeessa ta'e uumaniif karoora qajeelchu.
Kaka'uumsa Sanyi fi Hawaassummaa (RSJI) Magaala Siyaatil irraa ijaaramuun, sababa sanyummaa dhaabatiin garaagarummaa sirnoota geejjiba keenyaa keessa jiruuf TEF deebii kenna.
2021 keessa, Koroora hojiirra oolchuu irra deebin saxaxuuf SDOTn miseensota TEW wajjin waliin hojjachuu itti fufa. Amajjii anga Hagayya 2021 tti, waliin karoora hojiirra olchuu uumuf hojjattoonni SDOT fi miseensonni TEW walgayeelleen walitti fufiinsa qaban kan hirmaattota akka qunnamtii caalan gadi-fagoo ijaaran, dammaqiinsan dhaggeefatan, fi haala waa haraa maddisiisuun yaada waljijjiiruu dandeessise irratti waliin dalaganiiti turan.
Meeshota Caasaa Walqixxummaa
Caasaa Walqixxummaa Geejjibaa, Kutaa 1: Sonaawwan fi Tarsiimoowwan
Barrullee Walqixxummaa Geejjibaa (Maxxansuu fi Qooduu)
Galmee (Folio) Caasaa Walqixxummaa Geejjibaa
Karoora Hojiirra-Oolchuu TEF
Karoorri hojiirra-oolchuu tooftaalleen sonaawwan fi tarsiimoowwan TEF Kutaa Tokko keessatti hiikni kennameef fulduratti kan tarkanfachiisan kan dabalatuudha:
Tooftaalleen kun bakka addaddaatti bahu deeggarsa keennuu, imaammata, sagantaa, pirojeektii irraa anga tooftaalleen dipartimentii keenyaa caalan jijjiiramoota aadaa ta'an kan akka adeemsaleen keessaa fi shaakkaliiwwan haalan dansaa.
Karoorichi 2022 anga 2028 tti adeema, akka sanada jijjiiramaaf warraaqaa kan yeroo yeroon sirraayuu, to'atamu, fi haaromu ta'uusaa hubachuun.
Daashboordiin karoora hojiirra oolchuu odeeffannoo waliin jijjiirun danda'amu asii gadii tooftaalleen 200 oli sonawwan TEF tiin qinda'an dabalata. Dabalataan barachuuf qoradhu!
Daashboordii kana foddaa/taabii haaraa kessatti ilaalaa.
Gosa-Sanyii fi Sadarkaa Hawaasa-Dinaagdee tiin Faalama Qileensaa Konkolaata-Walitti Hidhate irratti Jijjiiraalleen.
Walqixxummaa dhabuun fayyadamuu dhabuu meshootaa fi tajaajilota saaxilamuu faalama qileensaa irratti garaagarummaa sanyii-gosaa dabala
Faalama Qileensaa Konkolaata-Walitti Hidhateef Saaxilamuu irratti Garaagarummaa Sanyummaa Hubachuu
Namoonni adii hin taane faalama qileensaa maddaawwan hunda irraa haalan dha'amoodha
Eenyu akka qaama Garee-hojii Walqixxummaa Geejjibaa keenya ta'e feedhii qabduu?
Bulchaa Sagantaa Walqixxummaa Geejjibaa